सामाजिक सञ्जाल Archives - नागरिक रैबार
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरुलाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति पोष्ट भइरहेको भन्दै आयोगले यस्ता काम रोक्ने चेतावनी दिएको छ । अन्यथा निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ र निर्वाचन कसुर ऐन र प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही […]
फेसबुकमा गाली गरेर ‘छोटेराजा’ लेखेको भन्दै वडाध्यक्षद्वारा सेवा प्रतिबन्ध
धनगढीः सल्यानको बाघचौर नगरपालिकाका वडाअध्यक्ष प्रेमबहादुर पुनले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई ‘छोटेराजा’ लेखेको भन्दै स्थानीय दिल केसीलाई वडा कार्यालयबाट कुनै सेवा नदिने विज्ञप्ति टँसाएका छन्। वडाअध्यक्ष पुनले कुनै कानूनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया नगरी सोझै सेवाबाट बञ्चित गरेका हुन्। उनको उक्त विज्ञप्ती सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। केसीले सामाजिक सञ्जालमा वडाअध्यक्षमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी लेख्ने गरेका थिए। केसीले […]
धनगढी: हालै सामाजिक सञ्जालमा एक फोटो भाइरल बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटमा एक प्रयोगकर्ता समर राजले सो तस्विर सेयर गरेका हुन। उक्त तस्बिरमा एक पत्नीको लाचापरिपन देखिएको छ। ती महिलाले आफ्ना पतिलाई बचाउन मुखमा मुख जोडेर श्वास दिइरहेकी देखिन्छन्। अक्सिजन सिलिन्डरको अभावमा ती महिलाले आफ्नो पतिलाई अन्तिम क्षणसम्म मुखबाट सास दिँदै बचाउन खोजिकी जस्तै देखिन्छन्। […]
दाङ : दाङमा टिकटक बनाउने क्रममा झोलुंगे पुलबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका युवकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डीएसपी शिवबहादुर सिंहका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ बिजौरीका २४ वर्षीय रमेश थापाको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा सोमबार बिहान मृत्यु भएको हो । शनिबार दिउँसो करिब २ बजे बबई गाउँपालिका वडा नम्बर ५ […]
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल कम्पनी फेसबुक तथा इन्स्टाग्रामको म्यासेन्जरमा विश्वभर समस्या देखिएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म फेसबुक वा इन्स्टाग्रामले भने आफ्नो म्यासेन्जरमा के भएको हो भन्ने विषयमा केही अपडेट गराएको छैन । डाउनडिटेक्टरका अनुसार अहिले विश्वभरका मानिसहरुले फेसबुक तथा इन्स्टाग्रामको म्यासेन्जरमा समस्या आइरहेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । नेपाली समयअनुसार करिब सवा तीनदेखि फेसबुक तथा […]
काठमाडौं- विदेशमा रहेका नेपालीले अब मोबाइलबाटै पैसा पठाउन सक्ने भएका छन् ।वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले मोबाइलबाटै आफूले कमाएको रकम आफन्तलाई पठाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, इलेक्ट्रोनिक कार्ड र डिजिटल वालेटमार्फत् रेमिट्यान्स पठाउन मिल्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।यसअघि रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणाली वा विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीले […]
व्यक्तित्व विकासका कुरामा मेरो अझै कमजोरी रहेछ: दीपाश्री
काठमाडौं – केही समययता विवादमा तानिएकी कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाले आफूले ३ गल्ती गरेको भन्दै पुनः माफी मागेकी छिन् ।उनले आफूले यो घटनाबाट धेरै ठूलो पाठ सिकेको र अब वृत्ति विकासमा पनि ध्यान दिने र अन्तर्वार्ताका बेला थप ध्यान पुर्‍याउने भन्दै माफी मागेकी हुन् । केही महिनाअघि एक अन्तर्वार्ताका क्रममा दीपाश्रीले ‘राजेश हमाल महानायक […]
हासो अनि खुशी लाई शीत देखे आज फेरि ! निरासामै गजल अनि गित लेखे आज फेरि !! मुस्कान जति धुवाएर आकासिदै बिलाउदा ! साथ दिने आशुलाई मीत देखे आज फेरि!! कोहि काख कोहि पाखा दैबको खेल यस्तै रैछ ! यस्लाई नि संँसारको रित लेखे आज फेरि !! लेख्नु पर्ने हारै थियो , नढाटेर लेख्नु पर्दा […]
अब फेसबुकबाट गुगलमा सार्न सकिनेछ फोटो
काठमाडौं । सोसल मिडिया साइट फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि एक नयाँ टूल लिएर आएको छ । उक्त नयाँ फिचरको सहयोगबाट फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोटो तथा भिडियो फेसबुकबाट गुगल फोटोजमा सार्न सक्नेछन् । फेसबुकले यो नयाँ फिचर आयरल्याण्डबाट सुरु गरेको हो । सन् २०२० बाट यो विश्वका सबै प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध हुने बताइएको छ । गत […]
महानायक राजेश हमाल श्रीमती मधुसँग भुटानमा रमाउँदै
काठमाण्डाै । अभिनेता राजेश हमाल अहिले भुटानमा रहेका छन् । क्विज मेनिया कार्यक्रममा सहभागी हुन अभिनेता हमाल आफ्नी श्रीमती मधु भट्टराईसहित भुटान पुगेका हुन् । अभिनेता हमालले बिहीबार दिउँसो आफ्नी श्रीमती तथा टिमका अन्य साथीसँग खिचिएको तस्विर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपलोड गरेका छन् । जसमा हँसिलो मुद्रामा देखिएका हमाल दम्पत्ति विभिन्न स्थानमा पुगेर रमाइलो गर्दै […]